Indlela yokwenza ubuso bekristomassage ekhaya?
Ngokuqinisekileyo, abaninzi bethu baye bakuva malunga ne-cryotherapy, ebonakalayo engekho kuphela kwiyeza, kodwa nakwi-cosmetology. Umphumo wobanda emzimbeni wethu waziwa kwixesha elidlulileyo, kwaye ubuchule bokuphucula isakheko sekhanda lobuso lugcinwe kuze kube namhlanje. Le nqubo inokwenziwa kokubili kwigumbi le-cosmetology ngoncedo lwe-nitrojeni yamanzi, kwaye ekhaya ngokubonga kwiikhabhi ze-ice. Emininzi malunga neentlobo ze-cryomassage, izibonelelo zayo, ukuchasana kunye nokusetyenziswa kobuchule, funda eli nqaku.
Le ndlela ye-salon sele izuze ukuthandwa kwabafazi kunye namadoda. Siyabulela kwiiseshini ze-cryomassage kunye ne-nitrogen enomlambo, ulusu luba lufanelekile, olutsha, zonke iintlobo zokuphuphuma ziyaqedwa, kuquka i-demodicosis. Ukushisa okubanda kakhulu kubangela ukuba izitya zivumelane ngokukodwa, kwaye zandise ngandlela-thile, nto leyo enegalelo ekuqhubeni kwegazi kunye ne-lymph kuzo zonke izigaba ze-epidermis. Izisipha zomzimba zigcwele i-oksijeni, leyo iyanceda kwaye iyenze ikhumba. Kwakhona, umphumo weqhwa ubalaseleyo kwi-normalizing umsebenzi weengcungcuthe ze-sebaceous, eziyimfuneko kakhulu kunyango lwe-acne. Ukuba ukugqithisa ebusweni kubangelwa i-microscopic mite demodex, ke le ndlela iza kuba luncedo ekupheliseni le ngxaki. Ngeeseshoni eziqhelekileyo ze-cryoprocedures, uza kubonakala uncinci kuneminyaka yakho, oku kuhlolwe ngaphezu kwesinye isizukulwana.
Ingundoqo yile ndlela kukuba ulusu lucaciswa kwiidrags liye lancipha kwi-nitrogen, iqondo lokushisa elingama -196 degrees. Isigulane asinakuvakalelwa, kungekudala nje, njengeqhwa elibi. Inkqubo ihlala malunga nemizuzu engama-30. Kunconywa umphumo osisigxina ukuba uhambe ngeeseshoni ezilishumi zeveki nganye.
Ukungqinelana kule massage kukuphulwa kweembilini zomzimba, i-dermatitis, amanethiwekhi angama-vascular.
I-Cryomassage yobuso ekhaya
Ukuba ngenxa yesizathu esithile awukwazi ukuya kwi-cosmetology, ngoko kukho enye indlela efanelekileyo kakhulu, elula ukuyenza ekhaya.
Ngenxa yesiphumo esiphumelelayo, sincoma ukuba wenze inkqubo nganye imihla ngemihla.
Ngoko, ngokuphumeza i-cryomassage ekhaya, uya kufuneka ulungiselele iikhabhi ze-ice ngokusekelwe kwi-decoctions yemifuno. Ukulungele ngokufanelekileyo i-calendula, i-chamomile, iinqununu. Ukutya okungcono kwesikhumba, phambi kweqhwa, ungongeza ioli kwiifomsile zevithamini A kunye no-E.
Yenza le ngqungquthela kwiisetyhula, ukuphepha ukubonakalisa ixesha elide kwindawo ebusweni, ekubeni usengozini yokuvuvukala kwesibindi somzimba. Qhubekani kwinkqubo uze uziva ungakhathazeki ngokubanda.
Ukujikelezwa kwegazi okungcono kunye ne-tetcular tone, i-cosmetologists ikwacetyiswa ukuba ihlambe ngamanzi afudumele emva kokufaka i-ice. Emva kokuxubha ngamagqabha e-ice, ubuso bubonakala buninzi kwizenzo zamagqabi kunye nama-lotion.
Ewe, ukusetyenziswa kwe-cryomassage kuyabonakala kwaye nangona kunjalo ukuba le ndlela ayikho konke ixabiso kwaye ayithathi ixesha elide. Ungalibali ukuyenza rhoqo le migaqo yokumangalisa, kwaye isikhumba sakho siya kukushiya ngokubulela ngendlela yobumnandi nolutsha.
Ubuhle kwi-3D: izandi zokuziqhenqa iziqhamo zase-Estée Lauder iNew Dimension
Ukuhlahlela, iimaski kunye nobuso be-lotion kwi-dill
Inkukhu kwi-ukhilimu omuncu ngephepha elibomvu
Isaladi yeSwitzerland kunye nesambatho saseFransi
Izinto zokuphuhliswa kwengqondo yabantwana: ukuzalwa, indawo, imfundo, ukukhuliswa, umsebenzi
I-pie ne-tuna kunye neeksi